Netizen Report: Hatsahatr’i Brezila ve ny fiarovana ny zo nomerika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2015 9:17 GMT
Ny antenimieram-pirenena ao amin’ny kongresin’i Brezila dia eo ampandinihana ny volavolan-dalàna hampitombo avo roa heny ny sazy amin’ny fanaratsiana sy ny lahateny manaratsy raha an-tserasera no itrangan'izany, sy hanafoanana ny fiarovana eo amin'ny fifandraisana an-takonana mandritra ny famotorana heloka bevava.
Mbola lavitra ny lalan’ilay volavolan-dalàna alohan’ny hahatongavany any amin’ny latabatry ny filoha Dilma Rousseff – mbola mila fankatoavana anaty fivorian’ny komity sy ny fankatoavan'ny antenimieram-pirenena, miampy ny fankatoavan'ny antenimieran-doholona. Saingy raha tafapetraka, dia hanafoana ny fiarovana ny fiainan’ny tena manokana voasoratra ao amin’ny Marco Civil (ilay lazaina ho “Lalànan’ny Zo an’Aterineto” Brezilianina) amin'ny famelana ny fampanoavana amin'ny raharaha ady heloka bevava hitaky ny rakitahiry momba ilay mpiserasera, tafiditra amin'izany ny votoatin’ny hafatra an-takonana, tsy misy fankatoavana avy any amin’ny mpitsara aloha. “Hanavao” ihany ny fehezan-dalàna ady heloka bevava amin'ny fanovanana ny voambolana “media sosialy” ho ao anatin'ny lisitry ny heloka voafaritra ho fanaratsiana sy mampitombo avo roa heny ny sazy noho ireo fanitsakitsahana izany, miampy ny famelana ny mpitory hitaky fikosehana maharitra ny votoaty izay azony porofoina ho manohintohina ny voninahiny izany. Hamarinin'ilay volavolan-dalana ireo fiovana ireo amin'ny fanondroana ny fiantraikany “mandravarava” nataon'ilay resaka fanaratsiana rehefa miely ao amin'ny media sosialy.
Kanefa ny tantara dia mety ho eo ankilan'ny zon’olombelona eto. Ny mpitondratenin'ny fahafahana sivily dia nanome anaram-bositra azy ity ho “volavolan-dalànan'ny mpitsikilo” (#PLEspiao) na “AI-5 niomerika” mampahatsiahy ny AI-5, didy hitsivolana iray nivoaka tamin'ny 1968 nandritra ny fitondrana jadona miaramila tao Brezila izay nangeja mafy ny fahafahana mivory sy miteny. Niroborobo ny fanentanana tamin'ny aterineto manohitra ireo fanitsiana ary heverina ho nanampy tamin'ny fanemorana ny fandatsaham-bato momba ilay volavolan-dalana izay tokony notontosaina tamin'ny herinandro [tapatapaky ny volana septambra] kanefa dia nahemotra. Nisy fivoriana azon'ny rehetra natrehina momba ity raharaha ity tamin'ny 29 septambra ka novinavinaina ho tamin’ny 01 oktobra ny fandatsaham-bato manaraka.
Ny Ivonterana Beta Misahana ny Aterineto sy ny Demokrasia, fikambanana Brezilianina iray, dia nandresy lahatra tao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Brasil Post an'ny Huffpo fa tokony hisy fomba hafa tsaratsara kokoa iadiana amin'ny heloka bevava natao tato amin’ny aterineto :
Ny Foiben'ny teknolojia sy ny Fiarahamonina ao amin'ny Getulio Vargas Fondation, Oniversiten'ny siansa sosialy voalohany ao Brezila, dia niantso ny volavolan-dalàna ho mifanohitra amin'ny lalampanorenana. “Iza no mahazo tombontsoa amin'ity tetikasa ity? Ny tombontsoam-bahoaka amin'ny ankapobeny sa ireo te hiaro ny tenany amin'ny fanarahamason'ny vahoaka?”
Manamafy ny zo hohadinoina ny filoha Ekoadaoreanina Rafael Correa – fa ho azy irery ihany izany. Naka vola aman-tapitrisany tao amin’ny tahirim-panjakana i Correa entina nampiasa mandritra ny fotoana voafetra orinasa Meksikanina iray hanala ireo fampahafantarana mitsikera miresaka azy sy ny vadiny ao amin’ny aterineto, ka tafiditra ao anatin'izany ilay fanadihadiana an-tsary notontosain'ilay mpanao horonantsarimihetsika Santiago Villa, ny fandaharana iray momba ny fifidianana avy amin'ny politisianina iray mpifaninana aminy, eny fa na ny tatitra fandosirana tranomaizina avy amin'ny fonja ekoadaoreanina aza, araka ny rakitra azon'ny BuzzFeed. Nampian'ny vaovao ny fitomboan'ny lisitry ny sakan-dalana natsangan'ny fitantanan’i Correa hanoherana ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny firenena : vao tapabolana izay izahay no nitatitra ny fanakatonana vondrom-pahafahana media Fundamedios, ary tamin'ny volana Aogositra ny Ekipa Mpisovoka no namoaka ny firotsahana mivatravatra nataon'ny governemantan'i Ekoadaoro amin'ny fampiasana rindram-panimbana (malware) sy amin'ny fanakaramana mpaneho hevitra manohana ny governemanta.
Tsy irery ny bilaogeran'ny Zone9 amin'ireo Ethiopianina voampangan'ny Fanambarana Fiadiana amin’ny fampihorohoroana noho ny filazana ho nanao fanitsakitsahana toy ny fikatrohana an-tserasera sy ny fanarahana fiofanana amin'ny fitaovam-piarovana nomerika. Olompirenena telo, Zelalem Workgenegu, Yonatan Wolde ary Bahiru Degu, izay vao haingana no fanta-bahoaka ny raharaha mahavoarohirohy azy ireo, dia notazonina tamin'ny 08 jolay 2014 noho ny fisoratana anarana hanatrika fiofanana momba ny fiarovana an-tserasera. Toa ireo bilaogeran'ny Zone9, dia nahemotra hatrany ny fotoam-pihainoana azy ireo ao amin'ny fitsarana. Antenaina hiseho eo amin'ny fitsarana indray ry zareo eo anelanelan'ny 7 ka hatramin’ny 9 novambra amin’ity taona ity.
Notazonin'ny Mpiambina revolisionera Iraniana tamin'ny faran'ny volana jolay teo ny bilaogera malaza amin'ny teknolojia antsoina hoe Arash Zad. Tsy mazava ny antsipirihan'io fisamborana io, ary ankatoavin'ny fikambanana mpandala ny zon'olombelona ho fisamborana noho ny fanamparam-pahefana izy ity. I Zad dia nalaza tokoa tamin'ny famoronana sy ny fananganana teknolojia any Iran, ka nanangana ny Startup Zig Zag Labs, orinasa tanora iray nahazo ny lokan'ny Firenena Mikambana manana tanjona handrisihana ny vehivavy iranianina hiditra ao anatin’ny sehatry ny teknolojia sy ny sehatry ny fisantaran'andraikitra.
Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina ilay mpikatroka nogadraina sady artista antsoina hoe Atena Farghadani tamin'ny septambra ho fanoherana fihoaram-pahefana am-bava ataon’ny mpiambina ny fonja. Nilaza ny renin’i Farghadani, Eshrat Ardestani fa mila fitsaboana haingana izy ary mitombo ihany koa ny soritr'aretin'ny lio (rà) nandritra ny fanagadrana azy. “Very tanteraka ny maha voninahitry ny tanora mpianatra oniversite an’i Atena any am-ponja. Tsy nanan-javatra hafa ho ariana intsony izy. Fa tsy ilaina izao fampijaliana ara-tsaina atao amin'ny tovovavy tanora gadraina izao”, hoy ny reniny.
Ny alakamisy voalohany volana Oktobra Antenimieram-Pirenena Frantsay no handatsa-bato amin'ny volavolan-dalàna fanarahamaso iraisampirenena izay hanitsy ny lalàna iray vao lany tamin'ny andro mafana [ilabolantany avaratra] lasa teo, tamin'ny fotoana nanafihana ny Charlie Hebdo, izay nanome fahefana bebe kokoa ny manampahefanan'ny fitsikilovan'ny Frantsay hanara-maso sy handrakitra fifandraisana elekitrônika noho ny fiarovam-pirenena. Ny fanitsian-dalàna dia hahatonga fanaraha-maso mafimafy kokoa ny fifandraisana miampita firenena sy mahasahana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny hosina an'aterineto ambanin'ny ranomasina. Namelona lakolosy fanairana natao tamin'ny alalan'ny famakafakana sy taratasy misokatra ho fanoherana ny volavolan-dalàna ireo mpisolo tena ny vondrom-pahafahana sivily ahitana ny European Digital Rights sy ny La Quadrature du Net, taratasy nosoniavin’ny vondrona firaisamonina maro manerana izao tontolo izao.
Eo ampihainoana ny raharaha Max Schrems, olompirenena Aotrisianina sady mpikatroka naka ny tompon'andraikitry ny rakitahirim-piarovana irlandey ho eo amin'ny fitsarana ao anatin'ny ezaka handravahana ny tsy firaharahian'ny orinasan'i Etazonia tahaka ny Facebook sy ny Google ny lalànam-piarovana rakitahirin'ny Vondrona Eoropeanina Ny Lapan’ny Fitsarana an'ny Vondrona Eoropeanina amin'izao fotoana izao. Notsikerainy ny fomban'ny NSA “manaramaso tsy misy anavahana ny daholobe”, ny fahavitan'ny NSA manangona rakitahiry antakonan'ny mpiserasera ao Etazonia no mamotika tsikelikely ny tolotra ara-pikirakirana ny fiainana manokana omen'ny orinasa rahaka ny Google sy ny Facebook amin'ireo mpanjifany ao amin'ny Vondrona Eoropeanina, izay misitraka fiantoham-piarovana rakitahiry bebe kokoa noho ireo mponina ao Etazonia.
An Analysis of the International Code of Conduct for Information Security – [Fandalinana ny Lalànan'ny Fomba Fitondran-tena Iraisampirenena amin'ny Fiarovam-Baovao] – Citizen Lab
Nandray anjara tamin'ity tati-baovao ity i Mary Aviles, Ellery Roberts Biddle, Taisa Sganzerla ary i Sarah Myers West